सुधारिँदै प्रादेशिक अस्पताल : विपन्नलाई आउजाउ खर्चसहित निःशुल्क उपचार
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बुधवारदेखि ओपीडी (बहिरंग विभाग) सेवा शुरू भएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) त्रासका कारण मुलुकमा ‘लकडाउन’ शुरू भएसँगै बन्द भएको ओपीडी सेवा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन थालेको हो ।
लकडाउनमा अस्पतालमा आकस्मिक र प्रसुति सेवा मात्रै सञ्चालनमा थियो । बन्दाबन्दीमा सरकारी र निजी अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गर्दा बिरामीले चरम समस्या भोग्दै आएका थिए ।
ओपीडी सेवाका लागि प्रादेशिक अस्पतालले छुट्टै संरचना निर्माण गरेको छ । ओपीडी कक्षमा बिरामीको चाप हुने र भौतिक दूरी काम हुन नसक्ने भएपछि नयाँ संरचना तयार गरिएको छ । अस्पतालका पुराना संरचना हटाउन मिल्ने गरी संरचना बनाएको छ । अस्पतालको नयाँ भवनका लागि गुरुयोजना बनेको छ ।
अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले ‘फिवर क्लिनिक’ सहित १० वटा बहिरंग सेवा कक्ष बनाएर एकसाथ उपचार सेवा थालिएको बताए । ज्वरोका बिरामीका लागि अलग्गै क्लिनिक बनाइएको छ । ज्वरो आएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको जोखिम हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि अलग्गै इमर्जेन्सी विभागतर्फको छुट्टै ठाउँमा राखिएको छ । ‘फिवर क्लिनिक’मा आएका बिरामीको पीसीआर पनि जाँच हुनेछ । पीसीआरको रिपोर्ट आउने समयसम्म त्यहीँ राखिने छ । सो स्थानमा १०–१२ शय्याडको आइसोलेसन कक्ष सहितको संरचना तयार भइरहेको छ । संक्रमण देखिएकालाई धागो कारखानाको आइसोलेसनमा पठाइनेछ ।
पीसीआर मशिन खरिदका लागि अस्पतालले टेन्डर प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । अस्पतालले कोरोना परीक्षण समेत आफैं गर्ने तयारी थालेको छ । अस्पतालमा अहिले भएको कामले केही आशा जगाएको छ ।
अस्पतालको मुख्य गेटको उत्तरतर्फ ‘ट्रस्ट’ निर्माण गरेर भीडभाड कम गर्दै सेवा शुरू हुनेछ । सामान्य अवस्थामा अस्पतालबाट दैनिक १ हजार जनाले सेवा लिने गर्छन् । अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘लकडाउनकै समयमा ओपीडी चलाउन २ महिना काम गरेर संरचना पुनर्निमाण गरियो । यसका लागि अस्पताल विकास समितिबाट झण्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । निर्माण पूरा गरी सेवाको तयारी थालेका छौं । ‘सोसल डिस्टेन्स’ सहित बुधवारदेखि सेवा दिँदैछौं ।’
कोरोना बाहेकका रोगका बिरामीले सहज उपचार पाउनुपर्छ भनेर ओपीडी सेवा अगाडि बढाइएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । ‘कोरोना महामारीको सामना गर्दै सबै सेवा सञ्चालन गर्ने योजना प्रादेशिक अस्पतालले बनाएको छ,’ उनले भने ।
पुरानो पाकिङलाई बिरामी पालो पर्खिने ठाउँ बनाइएको छ । बिरामीलाई भौतिक दूरी कायम हुने गरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ओपीडीका चिकित्सक समेत एउटा/एउटा क्याभिनमा बस्नेछन् । सबै क्याभिनमा शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा पार्किङ गेट बाहिर राखिएको छ ।
गेटबाट भित्र छिर्दा बिरामी वा बिरामीका आफन्तले अनिवार्य मास्क लगाउन सुरक्षा गार्डले निर्देशन गर्छन् । गेटबाट प्रवेश गरेलगत्तै स्यानिटाइनजर प्रयोग गरेर हात सफा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पताल परिसरभर १५ स्थानमा साबुन पानीले हातधुने व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ वटा नयाँ शौचालय पनि थपिएका छन् । ओपीडीमा आउने बिरामीलाई शौचालय नहुँदा इमर्जेन्सी विभागमा जानुपर्ने अवस्था थियो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डन डा. राजेन्द्र खनालले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरी अहिलेको अवस्थामा आएको बताए । डा. खनालले छुट्टै ओपीडी कक्ष तयार भइरहेकाले सहज रुपमा सुरक्षित उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिने बताए । ‘कोरोनाका सम्भावित बिरामीको स्वाब संकलन, एक्सरेसहित आईसीयू शय्या समेत त्यहीँ व्यवस्थापन हुनेछन् । कोरोना जोखिम क्षेत्रका गर्भवतिलाई निजी अस्पतालले सेवा नदिएपछि प्रादेशिक अस्पतालले सेवा दिएको छ । विपन्न र गरीब व्यक्ति अस्पताल आएर उपचारपछि आउँदा–जाँदा लागेको गाडी भाडा समेत दिने गरी अगाडि बढेका छौं,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।
भौतिक पूर्वाधारको काम समेत अस्पतालले गर्दै आएको छ । अस्पतालको उत्तरतर्फको जग्गा खाली गराइएको छ । एउटा पेट्रोल पम्प र रक्तसञ्चार केन्द्र बाहेकका संरचना हटाइएको छ । बाँकी संरचना समेत छिट्टै हटाइने तयारी छ । तत्कालका लागि सो स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गरिने छ । सो स्थानमा २० तलाको व्यापारिक भवन बनाउने दीर्घकालीन योजना रहेको छ ।
अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स समेत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । रक्तसञ्चार केन्द्रलाई अस्पताल परिसरमा व्यवस्थित गर्नेदेखि बिरामी र तिनका कुरुवालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खानाको प्रबन्ध मिलाउने गरी चमेना गृह बनाइँदैछ ।
गत माघमा प्रदेश सरकारले भट्टराईलाई अध्यक्ष र खनाललाई मेसुमा नियुक्त गरेको थियो । २ जनाको सहकार्य र अस्पतालको विकासमा देखिएको खटाइबाट सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । १०९ वर्ष पुरानो अस्पताल लामो समयदेखि राजनीतिको चेपुवामा परेर विकास हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउन सकेका छैनन् । अस्पतालमा चिकित्सक, प्राविधिक र कर्मचारीसहित ५७० जना कार्यरत छन् ।
प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका अस्पतालको १० तले भवन निर्माण हुने र त्यसमा सबै सेवा उपलब्ध गराउने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । गुरुयोजनाको लागत ६ अर्बको छ । भवनको माथि हेलिप्याड समेत रहनेछ । हेलिप्याडबाट सिधै इमर्जेन्सीमा झर्ने लिफ्ट समेत बन्नेछ ।
गुरुयोजनाअनुसार अस्पतालको संरचनाका लागि ६ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा १ हजार २०० शैया हुनेछन् । अस्पतालको अगाडिपट्टि रहेका व्यावसायिक सटर डोजर लगाएर भत्काइएको छ । सटर रहेको ठाउँमा पर्खाल निर्माण गरी बगैंचा बनाइने छ । अस्पतालमा साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका १६ जिल्लादेखि भारतबाट पनि बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् ।